जब ढकाल र थापा चिप्लिए तब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कै बेइज्जत गराए ! – Halkhabar kura
२१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १५:१४
जब ढकाल र थापा चिप्लिए तब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कै बेइज्जत गराए !
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले २ करोड ५० लाख डोज कोरोनाभाइरसविरूद्धको खोप निशुल्क दिने घोषणा गरेपछि नेपालमा समेत खुशीयाली छाएको छ, किनभने नेपालले समेत अमेरीकालाई खोप दिन अनुरोध गरेको थियो । संसारका विभिन्न मुलुकहरूलाई दिने भनिएकाले बाइडेनको घोषणामा नेपालले कति खोप पाउने हो भन्ने कहिँ कतै पनि खुलाइएको छैन ।
तर एक कदम अघि बढ्दै नेपालको सत्ता निकट ब्यक्तिहरुले उक्त खोप नेपालले यति पाउने उति पाउने भनेर लेख्न थालेका छन् । यस्तै सन्देश बाइडेनको उक्त घोषणापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका थिए । उनले नेपाललाई ५० लाख डोज खोप आउन लागेको लेखे । अझ राष्ट्रपतिको पहलमा उक्त खोप आउन लागेको समेत लेखेका थिए । तर, चौतर्फी बिरोध भएपछि उनले उक्त ट्वीट मेटेका छन् ।
महामारी रोकथामका लागि राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको सक्रिय सहभागीता भएपछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिकृया आइरहेका छन् । कसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उछिनेर राष्ट्रपति आफै सक्रिय हुन नमिल्ने भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने कतिले अत्यावश्यक कुरामा राष्ट्रपतिको पहलको प्रशंसा गरेका छन् ।
केहीले भने विग्रदो छवि सुधार्न राष्ट्रपतिले सबै ध्यान अन्यत्र लैजान खोपमा सक्रियता देखाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । अमेरिकाले नेपाल सहित केही मुलुकलाई ५० लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेपछि सरकारी पक्षका केही राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यसवारे सामाजिक सञ्जालमा खुसी ब्यक्त गर्दै लेखे । राष्ट्रपतिका प्रमुख संचार विज्ञ टिका प्रसाद ढकालले अमेरिकाले घोषणा गरेको ५० लाख खोप सबै नेपालका लागि भन्दै ट्वीटरमा लेखे ।
उनको ट्वीटको खण्डन गर्दै वरिष्ठ पत्रकार भानुभक्त आचार्यले भ्रमको खेती नगर्न भन्दै सुझाव सहित ५० लाख डोज खोप नेपालका लागि मात्र नभएको र त्यो राष्ट्रपतिको पहलले नभई अमेरिकाले यस अघि नै घोषणा गरेको को भ्याक्स योजना अन्तर्गत पहिल्यै निर्णय भएको खोप अनुदान हो भनेर प्रष्ट पारेका छन् ।
गंगालाल अस्पतालका वरिष्ट मुटुरोग विशेषज्ञ डा रामेश कोइरालाले सबै खोप नेपालका लागि हो भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले झुटो दावी गरे भनेर आरोप लगाएपछि मन्त्री ज्ञवालीले त्यसको खण्डन गरेका छन् । उनले आफुले ५० लाख डोज नै नेपालका लागि हो भनेर कतै नभनेको भन्दै झुटको सहारा नलिन सुझाव दिएका छन् ।
यस्तै सल्लाहकारहरुकै कारण गरिमामय राष्टपति र प्रधानमन्त्री पदकै बेईज्त हुदै गैरहेको छ ।
Previous अन्तत : लत्रने नै भए माधव पक्ष , एकता जोगाउन यस्तो सम्झौता भएको माधव पक्ष नेताको खुलाशा
Next आफ्नो घरमालिक अस्पताल भर्ना हुँदा पनि साथ नछाड्ने कुकुर (भिडियोसहित)